Iindaba zesiXhosa ngo11:00, 29 eyeNkanga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa ngo11:00, 29 eyeNkanga 2018
Written by Ashia Nkontsa on 29/11/2018
Ulutsha le DA luphakamele udlwengulo le ntombazane encinci
Iphiko lolutsha leDA livakalise inkxaso ngakusapho lwentwazana eneminyaka elishumi elinesithathu ubudala ekutyholwa ngelithi idlwengulwe lilungu leliqela elisisalamane sosapho. Ulutsha lweDA lithi lizakusoloko likho xa sukuba umrhanelwa evela enkundleni. Umrhanelwa ebevele ngokufutshane enkundleni kamantyi eWynberg phantsi kwezityholo zokudlwengula ebangela ukukhulelwa kwesalamane esineminyaka elishumi elinesithathu ubudala. Umnene lo ubelilungu eDA ukususela kunyaka ophelileyo kwaye ebesebenza njengonxulumanisi woluntu kwisiXeko seKapa kwade kwasebutsheni balo nyaka. Inkokheli yolutsha lweDA kuzwelonke umnumzana Luyolo Mphithi uthi bothukile zezi zityholo kwaye bahlab’ikhwelo kulutsha lweDA ukuba luchasane nezinto ezikumila kunje kwaye sele bebhalele kwisikhokelo khon’ukuze ummangalelwa anqunyanyiswe ukuvumela umthetho wenze indima yawo.
Amagosa okunyanzelis’umthetho awavumi nonyuso xesha lokusebenza
Amagosa okunyanzelis’umthetho kwisixeko saseKapa azalel’endle engavumi
nentwana ukusebenza ixesha elongezelelekileyo ukuqala ngomhla wokuqala
kulenyanga kawayidlokova ntoleyo inokushiya iilwandle, iindlela
zikawonke wonke kwakunye neepaki zisemngciphekweni wokuba zizigqubu
zezihange kweziholide zokuphela konyaka. Ngokutsho kweengxelo
eikhutshiweyo amagosa aphantsi kwemanyano iSAMWU anyanzelisa ukuba
kunanzwe izigunyaziso ngaphambi kokufika komhla wokuqala wenyanga
yomnga nanjengoko usosiba walemanyano ephondweni uXilisa Diniso edize
ukuba bangaphezu kwamakhulu amane amagosa ebelindeleke ukuba onyuselwe emsebenzini. UDiniso ulebele ngelithi bengamalungu eSAMWU bazidinile baya kumanejala wesixeko uLungelo Mbandazayo ukuyakufaka amaxwebhu abo ezikhalazo ngomhla wesixhenxe kwinyanga ephelileyo naye anikelwa kuRichard Bosman nokamva lakhe lilengalengayo emveni kokuba ibhunga lesisixeko lagqiba ekubeni liphande ukuba bekutheni ukuze lokaBosman kwakunye no Robbie Roberts babelala ngangub’enye nosopolitiki ekubeni kutyunjwe uRoberts njengomqondisi wamagosa okunyanzelis’umthetho.
IPalamente iyamkele ingxelo ephuma kwaEskom
Ikomiti ejongene namaqumrhu aphantsi korhulumente ePalamente iyamkele
ingxelo yayo kwimiba ephathelele urhulumento kwinkampani ephehla
amandl’ombane uEskom. Lekomiti icebise ngelithi kuzakufuneka
owayesakubangumphathiswa wamaqumrhu karhulumente uLynne Brown kwakunye nobefudula engumphathiswa wemicimbi yezekhaya uMalusi Gigaba bavele phambi kwekomishoni ephanda ukubanjwa ngobhongwana kukarhulumente ngamaqumrhu abucala. Usihlalo walekomiti uZukiswa Rantho
wolek’umsundulo ngelithi uDudu Myeni, uDuduzane Zuma kwakunye
nabanakwe bosapho oludal’iintetha lakwaGupta bayidelela ikomishoni
ngokusilela ukuvela phambi kwepalamente, ukanti uRantho ukwamemelele
ukuba usomlomo wepalamente athabathe amanyathelo angqongqo ngakubo
Ingcaciso yosapho olubulawe eVlakfontein
Kuvele ingcaciso emanyumyezi malunga nokubulawa kwamalungu osapho asixhenxe aseVlakfontein. Le ngcaciso iqulathwe kwingxelo efungelweyo yommangalelwa wokuqala u-Vusi Mabaso kwinkundla kamantyi yasePitoli nalapho avumayo ukubandakanyeka kwakhe kula matyala phof’abe amanye ala maxhoba adlwengulwa, agqejwa amatyeli aliqela ngehamile lo gama amanye afuthaniselwa de aphulukana nobomi. uMabaso uthi izimisele ukufunga ngelithi umsulwa nanjengoko wanyanzeliswa kwezi zenzo, esoyikisela obakhe ubomi. Uthi waxhwilwa ngumtyholwa wesibini uFita Khupe kwakunye nemigewu yaseKapa kwiminyaka emithathu edlulileyo yaza yamtlokothisa kubomi bolwaphulo-mthetho kananjalo imyalela ukuba aye eRhawutini khon’ukuze acim’igama onke amalungu osapho lakwaKhoza. Uthi uKhupe wayekho ngethuba kubulawa olu sapho. Kusenjalo, liyaqhuba namhlanje uviwo lwesicelo sebheyile.
untyumpantyumpeka ematyaleni uEskom
Imbi ngendlela engathethekileyo imeko yezimali yenkampani enkunkisha umbane yelizwe laseMzantsi Afrika u-Eskom. Le nkampani isebenzisa imali engaphezu kwengeniso yayo kwaye oku kuvele kwingxelo yayo yemali yeenyanga ezintandathu kananjalo igama layo liyavela kwizenzo zokubanjwa kukarhulumente weli lizwe ngobhongwana. Ingqonyela yakwaEskom umnumzana Phakamani Hadebe uthi akanasiqiniseko sokuba lonyaka ungaphela bengakhange bamilisele imilinganiselo yokonga umbane. Uthi kukho ukushokoxeka kwamalahle okubangelwe ziingxaki kwinkampani yakwaGupta ehambisa amahlale i-Tegeta. Kusenjalo, usihlalo wakwaEskom umnumzana Jabu Mabuza uthi le nkampani ikwimeko intyumpantyumpeka ematyaleni kwaye ayenzi ngeniso ngokwaneleyo.
iNPA iyalirhoxisa ityala ngakumalungu osapho lakwa Gupta
Igunyabantu lezotshutshiso iNPA iyalirhoxisa ityala ngakumalungu osapho lakwa Gupta kunye nosomashishini abasebenzisana nalo abatyholwa ngokubandakanyeka kwibholo lephulo lophuhliso lwefama yobisi iEstina kwiphondo lasefreystata. Umnumzana uLuvuyo Mfaku we-NPA ukuqinisekisile kwiqonga leendaba inews24 ukuba athunyelelwe incwadi amagqwetha wakwa Gupta esaziswa ngotshintsho lakamva nje. Eli tyala bekulindeleke ukuba lubuyele kwinkundla ka mantyi yase Bloemfontein ngomhla wesine kuDecember. UVarun Gupta omngumtshana wezalamane zakwaGupta ezingundaba mlonyeni,ingqonyela yenkampani i-Oakbay uRonica Ragavan,lowo wayesakuba lilungu lesigqeba samalungu e-Sahara,u –Ashu Chawla,lowo wayesakuba lilungu le TNA media uNazeem Howa ,umqondisi we fama i-ESTIN Ukamal Vasram kunye namalungu ezigqeba sikarhulumente wephondo laseFreystata ,uSylvia Dlamini, kunye Takisi Masiteng bebekwa izityholo ngokoyamene nalo mba wale fama.Bonke aba bathi banikwa ibheyile ngo Feb kulonyaka